Famolavolana ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina trano fandroana - anatiny amin'ny fomba-teolojia, loft, provence
Ny famolavolana ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina trano fialan-tsasatra - ahoana ny fomba hamelezana ny zoron-trano?
Ny endriky kanto ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina rindrina iray dia manintona ny mason'ny olona, ​​ny vavahadin-tseranana ao an-trano dia mibanjina tsara, mendri-kaja ary manaja. Ny fiakaran'ny hafanana dia tsy loharano hafanana fotsiny, fa koa singa mamirapiratika, izay miankina amin'ny endriny, dia afaka mifanentana tanteraka amin'ny endriky ny artista.
Efitrano velona amin'izao fotoana izao miaraka am-patana
Olona maro no manamboatra ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina razana iray mifandraika amin'ny fomba ofisialy Anglisy , saingy io tsipika ara-tsakafo io dia ampiasaina amin'ny lafiny hafa. Ny fisokafana amin'ny lelafo misokatra dia be dia be any amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao, ny firenena, ny barock, ny minisitry ny fiaraha-miasa na ny haitao. Noho ny fampandrosoana ny teknolojia maoderina, nanjary azo natao ny nametraka trano tsy vitan'ny afo fandoroana kitay, fa koa lasantsy na fitaovana elektrônika, ireo efitrano fandikan-dalàna marina .
Fomba hametrahana kamiao ao afovoan-trano:
kitay napetraka teo amin'ny rindrina;
Fomba fanorenana (vavahadin-tsarimihetsika na tranokely iray).
Tsy voatery hapetraka eo akaikin'ny rindrina ivelany ny tena foci. Amin'ity tranga ity, dia mety hampidi-doza ny fampiasana ny hafanana maina tsy hanamboarana trano fanorenana, fa ho an'ny tontolo manodidina. Ny safidy tsara dia ny endriky ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina kitay napetraka eo amin'ny rindrina anaty, izay mendrikendrehina amin'ny rindrina ivelan'ny varavarankely. Tsara ny manamboatra fitaovana amboarina manodidina ny vavahadin-tseranana mba hahafahana mamorona ny efitrano malalaka indrindra ho an'ny fitsaharana.
Famolavolana koveta amin'ny karazana solika nampiasaina:
bio-fonenana (ny fametrahana farafahakeliny ny gazy karbonika);
koveta fandroana ho an'ny trano.
Efitrano velona kely misy koveta
Miankina amin'ny layout ho an'ny efitrano madinika, azonao atao ny manolotra ireto safidy noforonina manaraka ireto ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amin'ny kitay - fametrahana fitaovana fanamafisam-peo na fitaovana famokarana. Ao amin'ny sehatra voafetra dia tiana ny tsy hameno ny zava-misy amin'ny antsipirihany tsy ilaina, manamboatra ny toerana eny akaikin'ny lafaoro miaraka amin'ny fitaovana maotina. Ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina efitrano fonenana ao amin'ny efitrano kely dia matetika miaraka amin'ny efitra fisakafoanana na efitrano fisakafoanana, amin'ity tranga ity dia miezaka ny hanangana vavahady iray ao anatin'ilay fizaràna manasaraka ny efitrano ao anatin'ny faritra.
Kitapo fisakafoana kafe sy trano fonenana
Ao amin'ireo efitrano iombonana, ny fomba tsara indrindra dia ny manasaraka ny faritra fihinanana avy amin'ny faritra hafa amin'ny alàlan'ny trano fonenana, trano fisakafoanana na sofa. Azonao atao ny manatsara ny vokatra tadiavinao handokoana ny rindrina amin'ny loko samihafa sy ny jiro manokana. Ny toeram-piompiana dia tokony hialana amin'ny toeram-pisakafoanana. Ny fofon'afo dia hahatonga ny toeram-piasana mafana sy tsy mahazo aina, ary fitaovana elektronika ao an-dakozia dia mora alaina amin'ny loto sy ny vovoka.
Ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny trano fisakafoanana misy koveta dia toa mendri-piderana sy mahasoa, ilaina ny manamboatra ny fitaovana fanasan-damba ao an-trano amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny efitrano mankany amin'ny efitrano, manodidina azy miaraka amin'ny kitapo mena. Ao amin'ny faritra fialantsasatra, azonao atao ny manamboatra tapety eo amin'ny tany, mametraka latabatra kafe eo akaikiny amin'ny toerana lavitra. Raha efa misy trano fanatobiana ity toerana ity, ny safidy idealy dia ny endriky ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina efitrano fehizoro na ny fitaovana vavahadin-tserasera ao amin'ny rindrina eo amin'ny sisin-tanin'ny faritra.
Efitrano fisakafoanana misy korana
Ao amin'ny efitrano kely, matetika ny faritra fisakafoanana dia tsy misaraka amin'ny faritra hafa amin'ny alàlan'ny rindrina lehibe. Amin'ny trangan'ny trano fisakafoanana miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia tokony hifanaraka amin'ny toe-javatra ny endriky ity fitaovana ity, ary ny trano rehetra manodidina dia voaravaka amin'ny fomba mitovy. Ny toeram-pamokarana dia hita eny amin'ny sehatry ny faritra mitoka-monina, na manao izany ao anatin'ny faritra iray manokana. Amin'ny endriny malaza, dia mety ho lasa tsipiriany momba ny firafitra izy, raha toa ka eo amin'ny andaniny roa amin'ny vavahadin-tseranana ihany no handamina ireo trano fisaka na efitra fisakafoanana miaraka amin'ny fitaovana, izay hanasongadina ny sombim-piainan'ny sary ankapobeny.
Efitrano fatorana efitrano fatorana mitafo
Io safidy io dia mety amin'ny trano kely kely, izay tokony hanisa isaky ny metatra isa voavonjy. Noho ny antony ara-piarovana dia tsara ny manamboatra trano fandroana elektrika ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny lelafo velona, ​​mahatonga ny efitrano mifanerasera ary mamela anao hametraka ny fanaka manodidina ho akaikin'ny vavahadin-tserasera. Ny famolavolana ny toerana manodidina ny lafaoro dia vita amin'ny vilany, kofehy na vato amin'ny loko sy mafana. Ao amin'ny efitrano fitsaboana dia azo atao ny mampiasa fitaovana roa tonta amin'ny alàlan'ny tranokely na rindrina ary manasaraka azy ho faritra.
Famolavolana efitrano fandraisam-bahiny miaraka am-patana
Ny endriky ny famolavolana izay manodidina ny vavahadin-tseranana, dia afaka manova ny toe-javatra ao amin'ilay efitrano, trano fonenana mahazatra dia ho tonga avy hatrany ny famolavolana tany am-piandohana ary hipoitra avy amin'ny andiana karazam-pitovozana toy izany miaraka amin'ny layout maniry. Ny wallpaper ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny miaraka amin'ny kitay dia tokony hofidina mba hampifandraisany amin'ny sisa amin'ireo singa noforonina, izay matetika matetika loko mafana. Aza hadino ny tombontsoa azo avy amin'ny fitaovana fanamainana, raha ankinina amin'ny profesora ny fikolokoloana sy ny fanamboarana, ny fofom-bika tsara tarehy dia hanome ny tranonao amin'ny hafanana mandritra ny vanim-potoana mangatsiaka. Ny mpandidy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny kitay dia voafidy, mifantoka voalohany amin'ny làlana stylistic, ary koa ny loko, ny fisian'ny fiompy dia tsy mandray anjara mavitrika. Ny rindrina mankany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny kitay dia napetraka eo amin'ny faritra mifanandrify amin'ilay efitrano noho ny antony fiarovana aloha
Rehefa manamboatra trano fanorenana trano tena izy, dia ampiasao fitaovana tsara tarehy, arak'izay azo atao mba hiarovana ireo rafitra amin'ny afo. Efitrano velona misy kitay ao amin'ny trano hazo dia mety ho efitrano azo antoka sy maotina, saingy ny asa fanorenana tompon'andraikitra dia tsy maintsy ataon'ny manampahaizana matihanina. Ny fitaovana elektrônika maoderina dia mora atao ho an'ny trano efa misy nefa tsy misy ny vola fanampiny ho an'ny fanamboarana sy fahazoan-dàlana manokana.
Efitrano fialantsasatra miaraka amina trano fandroana maoderina
Mifidy ny tenany ho an'ny tenany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny fomba maoderina mampitolagaga miaraka amin'ny kitay, mila mandalina ny toetoetran'ireo tanjona samihafa. Ohatra, amin'ny fomba maoderina, plastika, vera, chrome ary ny tafo-paty nipetaka, ny antsipirian'ny sary sokitra, ny endriky ny organika dia ampiasaina amin'ny fivalanana. Zavatra iray hafa - ny endriky ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina trano fandroana amin'ny Art Deco . Eto dia misy zavatra avo lenta avy amin'ny fitaovana voajanahary, vola varahina, seramika sy marbra. Ny décor dia mampiasa kôbio modely, kanto tsara tarehy, fitaratra.
Ny haitao, ny chebie-chic, ny art popo ary ny endrika hafa dia manana endri-javatra azo tsapain-tanana izay tokony hampiasaina amin'ny famolavolana sy famolavolana kesika. Amin'ny famolavolan'ny pôkôkôpà pop dia mahita gloss metallika isika, fialamboly, endriny mitovy endrika amin'ny sary hosodoko. Mahagaga fa ny fahanterana sy ny fahasamihafana tanteraka ao an-trano dia loharanon'ny hafanana amin'ny famolavolana ny shebbie-chic. Amin'ny endriny rehetra, ny singa antitra sy ny fananganana ny afon-dasy dia tsy maintsy manamboatra sy manintona sy mampihetsi-po.
Fialofana an-kalamanjana amin'ny trano fidiovana
Ny kitay hazo, gazy na angovo elektrika ao amin'ny atin'ny efitra fandraisam-bahiny dia tsy maintsy tanterahina amin'ny vy sy metaly metaly, ny fametrahana ireo fitaovana ireo dia ahafahanao mametraka mora foana ireo singa fototra mifandraika amin'ny tontolon'ny orinasa. Ny fantsom-batana sy ny varavarana dia vita amin'ny fitaratra hafanana, afaka manatrika izany ao anatin'ny rafitra sy ny fitaovana. Ny fisehon'ny fiandrasam-paty dia mazava sy geometrika, tsotra ary mendrika. Mena, fotsy manga, fotsy sy mainty matevina ao afovoany.
Efitrano fialantsasatra amin'ny fomba amam-panao miaraka amin'ny fiompiana
Ny efitrano fandraisam-bahiny klasika miaraka amina fantsom-panafody dia tokony hanana endrika mendrika sy marevaka, mba hahafahanao manamboatra trano fandroana maotina, afaka mividy volokano vita amin'ny vy, vita amin'ny vy na vato voaendaka. Ny haavon'ny loko dia mitazona amin'ny loko mafana sy mafana. Ho an'ny famolavolana, hazo tsy misy pentina dia nampiasaina betsaka, dia navela tao amin'ny endriny voalohany sy ny taonany mba hanamafisana ny endrika ivelany. Eo amin'ny fonosana dia mametraka sarivongana, fantson-tsoavaly, eo ambonin'ny vavahadin-tseraserantsika mamelatra sary amin'ny lafo vidy.
Efitrano fialantsasatra any Provence miaraka amin'ny kitron'ny afo
Ny lafaoro ao amin'io fomba amam-pihetseham-pitiavana io dia tokony hitovy amin'ny kitay miendrika kitay vita amin'ny hazo. Ny endrik'olona dia endrika vita amin'ny vato, ary ny ampahany amin'ny vavahadin-tseranana dia somary mandresy. Ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin 'ny afony dia tokony hodiovina amin'ny loko mafana, ny palette fingotra dia tena mamy, lavender, sand, fotsy, beige. Na dia manana fofom-piravahana aza ianao ao an-tokantrano, aoka ho azo antoka fa hametraka fitaovana maoderina ao amin'ny fanahin'ny retro ianao, mampatanjaka ny rivotry ny Provence - pokon-dandy, tongs, skop.
Efitrano fivarotana amin'ny loft style miaraka amin'ny kitay
Ny endriky ny loft dia miavaka amin'ny endrika tsotra, endrika tsy misy fotony. Eto amin'ity trano ity dia matetika hita ny biriky, hazo vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo. Raha tokony ampiasa amin'ny fampiasana kitapo maoderina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, fa tsy ny metaly vy na ny burzhuek voalohany, dia tsara ny manamboatra ny endriny. Misy karazany maro ny loko mifantoka - foiben-kesika ary ny fofona maoderina. Amin'ny tranga voalohany, manangana tranokala vato, biriky na kilaometatra ho an'ny biriky izahay. Ny tanora dia toy ny kamiao metaly, natao tamin'ny fomba maoderina, mampahatsiahy ny fitaovana famokarana.
Efitrano fialantsasatra amin'ny trano fisakafoanana misy koveta
Ireo mpifaninana amin'ny alpine freshness dia manandrana mandefitra ny loko eny an-tendrombohitra mankany amin'ny faritra misy azy ireo, ka mamorona tranom-boly an-kalamanjana. Ho an'ity endri-javatra ity, trano fivoahana na fanorenana misy rindrina vita amin'ny rétro noforonina tamin'ny vato. Tsy ilaina ny mampiasa vatokely, ianao dia afaka manamboatra ny efitrano ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny kitay misy kofehy vita amin'ny seramika izay misy vatosoa tany am-boalohany, na vatosoa tsara tarehy tsara tarehy. Ao amin'ny orinasa dia tsara ny mampiasa hides, fitaovam-piadiana, fitaovana tranainy.
Ny endri-javatra manan-danja amin'ny trano fialofana:
Loko manga malefaka.
Tsy misy ny manga sy maitso maitso.
Trano fanaka sy fitaovana hazo marobe.
Ampahany amin'ny fandravonana anatiny ny rindrina sy ny tranokala fiompiana vita amin'ny vato.
Ao amin'ny trano famolavolana dia zarazaraina miloko marevaka sy zavamaniry efa antitra.
Efitrano fivelomana amin'ny teny anglisy miaraka amina toerana fandefasana
Ny fanoritsoroana klasika anglisy dia tsy azo eritreretina raha tsy misy trano fananganana trano toy ny trano fivoahana tsara sy matanjaka. Matetika no nampiasaina be tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny, ka nahatratra ny lavarangana amin'ny lafaoro, natsangana tamin'ny vato na kofehy. Ilaina ny antsipiriany momba ny toe-draharaha - felam-bozaka maizim-bary sy hain-trano, izay misy ny fitaovana ho an'ny fofon'aina.
Ny fisehoan-javatra dia ny famolavolana amin'ny teny Anglisy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina trano fandefasana trano iray:
Ny vy, takom-bary, visera dia vita amin'ny vy.
Ny habaka amin'ny ilany ankavanan'ny ala dia matetika voaravaka amin'ny tontolon'ny tavy tsara tarehy vita amin'ny seramika tsara tarehy.
Ny rindrina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny kitay sy ny fitaovana hafa dia lafo, amin'ny endrika mibaribary.
Ny tranon'ilay efitra fandraisam-bahiny dia voaravaka amin'ny stucco, tsy voatery hampiasa rindrina sy lamba ny rafitra.
Ny fisian'ny hazo fisaka hazo ao amin'ny trano an-trano.
Ny paletsy lehibe - alokaloka, loko pastel, tantely, burgundy, kiriolina ary manga mangatsiaka.
3D Floor - Teknolojia
Ny atin'ny Khrushchev
Fanadiovana mpanadio ho an'ilay efitra fandraisam-bahiny
Varavarana varavarana varavarankely
Famoronana efitrano ho an'ny zazalahy iray
Topiary amin'ny zava-mamy
Edema amin'ny moka
Nahoana no nofy ny brownie?
Pizza ny tavin-tsakafo
Varietes de persimmons
Amy Schumer nizara sary tamin'ny fialan-tsasatry ny torapasika, tsy niraharaha ireo mpihetsiketsika
Sakafo roapolo - aiza no hanombohana?
Julienne miaraka amin'ny holatra ao amin'ny oven - recipe